Butwal Today News | समाचार | All news
‘दुई सन्तान ईश्वरका वरदान’ नाराको जमानामा ठाइँलो सन्तान न जन्मिन्छन अहिले न त ठाइँला दाइ जस्ता सोझा, ईमान्दार, सहयोगी र मिहिनेती मान्छे नै भेटिन्छन् । त्यसैले रुरुक...
सहकारी भन्नाले सँगसँगै मिलेर काम गरी आफ्नो आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हैसियत माथि उठाउन गरिएको सामुहिक प्रयासलाई बुझिन्छ । गाउँ ठाउँमा सहकारी संस्थाहरु संचालनमा छन् । सहकारीको बाढीमा उद्...
सहकारी भन्नाले सँगसँगै मिलेर काम गरी आफ्नो आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हैसियत माथि उठाउन गरिएको सामुहिक प्रयासलाई बुझिन्छ । गाउँ ठाउँमा सहकारी संस्थाहरु संचालनमा छन् । सहकारीको बाढीमा उद्देश्य अनुसार संचालन हुन नसक्दा सहकारी बन्द पनि भएका छन् भने कतै एकिकरण पनि भैरहेका छन् । कतै भने सहकारी संस्थाहरु फरक तरिका र ठूला संस्थाको रुपमा संचालन भइरहेका छन् । त्यसमध्येको एक सहकारी संस्था हो रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नं. १५ कोटीहवामा रहेको जनउत्थान बचत तथा ऋण सह...
आइतबारदेखि परेको बर्षाले तानसेन नगर-रानीमहल सडक खण्ड अवरुद्ध हुदा रानीमहल भई हिड्न यात्रु र पर्यटक अलपत्र परेका छन । दशैंका अवसरमा रानीमहल पुगेका...
आइतबारदेखि परेको बर्षाले तानसेन नगर-रानीमहल सडक खण्ड अवरुद्ध हुदा रानीमहल भई हिड्न यात्रु र पर्यटक अलपत्र परेका छन ।
दशैंका अवसरमा रानीमहल पुगेका आन्तरिक पर्यटक सडक माथिबाट ठाउँ ठाउँमा खसेको पहिरोकाकारण अलपत्र परेको स्थानियहरुको भनाई रहेको छ ।
वर्षादको समयमा बिग्रेको सडक दशैको अवसरलाई लक्षितगरि मर्मत गरेको भएपनि गत आइतबार देखि परेको वर्षादका कारण ४ ठाउँमा पहिरो खसेका खसेका कारण ठ...
गुल्मीमा खोलाले एउटा सबारी साधन बगाएको छ । सोमबार बिहान बुटवलबाट वामीटक्सार तर्फ आउँदै गरेको लु १ ज ३४३२ नम्बरको यात्रुवाहक जीप खोला तर्ने क्रममा गुल्मीको सत्यबती गाउँपालिका ६ अन्र्तगत डहर...
अपरान्ह दिउसो २ः३० बजेको समयमा डहरे खोला तर्ने क्रममा खोलाको बीच भागमा पुगेपछि अचानक जीप रोकिएपछि यात्रुहरु तत्कालै जीपबाट झरेका थिए । जीपमा सवार नौ जना यात्रुहरु जीपबाट झरेलगत्त...
नौं बर्षिय छोरा सहित गुल्मी मुसीकोटकी महिला बेपत्ता
रुपन्देहीमा एक ३१ वर्षीया महिला आफ्नो ९ वर्षीय छोरासहित बेपत्ता भएकी छन् । असोज २२ गतेदेखि वेपत्ता उनी घर र माइतको सम्पकमा नआएपछि खोजीका लागि आफन्तले म...
रुपन्देहीमा एक ३१ वर्षीया महिला आफ्नो ९ वर्षीय छोरासहित बेपत्ता भएकी छन् ।
असोज २२ गतेदेखि वेपत्ता उनी घर र माइतको सम्पकमा नआएपछि खोजीका लागि आफन्तले मानवअधिकारकर्मी, पत्रकार तथा प्रहरीलाई अनुरोध गरेको छ ।
गुल्मीको मुसीकोट नगरपालिका वडा नम्बर ५ निवासी संगीता गैरे बुटवल कालिकानगरस्थित सानीआमाको घरबाट एकाएक सम्पर्कबिहीन भएको उनका श्रीमान खडानन्द गैरे (देउती) ले बताए् ।
बजार अनुगमनः चार बर्षमा शुन्य कारवाही
जिल्लाका बजारमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको अनुगमन, स्थानीय पालिकाको अर्को अनुगमन, आन्तरिक राजश्व कार्यालयको पटके अनुगमन, औषधि व्यवस्था विभागको अर्को र वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागको समे...
जिल्लाका बजारमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको अनुगमन, स्थानीय पालिकाको अर्को अनुगमन, आन्तरिक राजश्व कार्यालयको पटके अनुगमन, औषधि व्यवस्था विभागको अर्को र वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागको समेत अनुगमन पटक–पटक हुने गरेको छ । स्थानीय पालिकाहरुले शहरी क्षेत्रमा मात्र नभएर ग्रामीण बस्तीमा रहेका साना बजारसम्म अनुगमनलाई विस्तार गरेका छन् तर,जति अनुगमन गरे पनि बजार भने सुध्रन सकेको छैन ।
विशेषगरी पर्व लक्षित तथा अन्य पटके अनुग...
आलु प्याज कुहिएको क्षतिपूर्ती कस्ले तिर्ला ?
प्रदेश सरकारकोे आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएका कोल्डस्टोरमा राखिएका आलु–प्याज उम्रिएको र कुहिएको अवस्थामा छन् । दशैंको मुखमा आलु र प्याज त्यस्तो अवस्थामा भेटिएपछि किसानमा चिन्ता...
प्रदेश सरकारकोे आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएका कोल्डस्टोरमा राखिएका आलु–प्याज उम्रिएको र कुहिएको अवस्थामा छन् । दशैंको मुखमा आलु र प्याज त्यस्तो अवस्थामा भेटिएपछि किसानमा चिन्ता छाएको छ । शुल्क तिरेर राखेको बस्तु नै बिग्रीएपछि त्यसको क्षतिपूर्ती कस्ले दिन्छ ? किसानले प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
शित भण्डारमा १ हजार ४ सय क्वीन्टल आलु राखिएको पाल्पाको रामपुरमा रहेको कोल्डस...
रुकुम पूर्वको कांग्रेस सभापतिमा पौडेल पक्षका रोका सर्वसम्मत
नेपाली कांग्रेस रुकुम पूर्वको सभापतिमा केशरमान रोका निर्वाचित भएका छन् । वर्तमान सभापित रोका दोस्रो कार्यकालका लागि सर्वसम्मत रुपमा सभापति चुनिएका हुन्...
नेपाली कांग्रेस रुकुम पूर्वको सभापतिमा केशरमान रोका निर्वाचित भएका छन् ।
वर्तमान सभापित रोका दोस्रो कार्यकालका लागि सर्वसम्मत रुपमा सभापति चुनिएका हुन् ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका रोका पूर्व सहायक मन्त्री समेत हुन् ।
उपसभापतिमा भीमबहादुर खड्का र तेजेन्द्र खाम तथा सचिवमा लोकेन्द्र शाह र हरिबहादुर केसी सर्वसम्मत निर्वाचित भएका छन् ।
पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–५, मरामकोटमा दुई दशकको बीचमा चार दर्जन घर परिवारले थातथलो छाडेका छन् । थातथलो छाड्नेमध्ये एक चौथाई घरपरिवार शहर बजारतिर लागेका छन् भने अरु भने गाउँकै नजिक र...